ICrittercism: UkuBekwa eSweni kokuSebenza kokuSebenza | Martech Zone
NgoMvulo, Meyi 5, 2014 Douglas Karr
ICrittercism yi ulawulo lwentsebenzo yesicelo iqonga elisetyenziselwa ukubeka esweni, ukubeka phambili phambili, ukusombulula ingxaki, kunye nokuhambisa ukusebenza kweapp yakho. ICrittercism inikezela umbono wexesha lokwenyani lokuchonga usetyenziso kunye neempazamo zohlelo lokusebenza kuyo yonke i-iOS, i-Android, iWindows Phone 8, iiHybrid kunye ne-HTML5 zokusebenza ezithi zibeke iliso kubasebenzisi abasebenzayo ngenyanga.
ICrittercism ibeke iliso ngaphezulu kwesigidi se-500 sesicelo, ilandelela ngaphezulu kwe-100 yezigidigidi zemithwalo, eziguqulela kwiziganeko ezingama-30,000 ngomzuzwana nakumawakawaka abathengi abasebenzayo. Iimpawu zibandakanya:
Multiple OS kunye nenkxaso yesixhobo -I-iOS, i-Android, i-HTML5, iFowuni yeWindows, okanye ii -apps zeHybrid
Ixesha lenene liDatha eNkulu -Iintengiselwano eziibhiliyoni ezintathu ngemini zacaciselwa kwinyani yokwenyani, enokwenzeka.
Iideshibhodi kunye neeNgxelo Izaziso -Ukubeka iliso kwimveliso yokuveliswa kwexesha-lokwenyani. Gcina iithebhu ngendlela iiapps zakho eziphucula ngayo ngokuhamba kwexesha.
Ukhuseleko lweRBAC, uKhuseleko lweDatha -Idatha ikhuselekile kwaye izazisi zomsebenzisi wokugqibela zichanekile ngokukhuselekileyo.
Ukufumaneka kunye nokuHlolwa kokuSebenza - ukubeka esweni kunye nokubonelela nge-SLA ekusebenzeni kweqonga.
Yakhelwe iSikali -Kusuka kwiivenkile zophuhliso ezizimeleyo ukuya kwimibutho emikhulu, yamanye amazwe.
tags: Androidiapmukubeka esweni ukufumaneka kweappesweni appukusebenza kweappukubeka esweni ukusebenza kweappukugxekwaUkhuseleko LwadathaIi-apps ze-HTML5HybridiOSusetyenziso lweselulaulawulo lwentsebenzo yesiceloUkhuseleko RBACWindows Phone 8
Ividiyo: Amanyathelo ama-5 oNxibelelwano oluNgcono loLuntu